လှတဲ့ မိနျးကလေးတှပေဲ ကွုံနရေတဲ့ နစေ့ဉျ အခကျအခဲလေးမြား -
အလှအပကို လူတိုငျးက သဘောကြ တတျပါ တယျ။ ဒါကွောငျ့ လှတာ ကောငျးတယျလို့ ယူဆနပေမေယျ့ တကယျတော့ လှတာက မကောငျးဘူးလို့ တှေးသူတှလေညျး ရှိနပေါတယျ။
အမြားအမွငျမှာ လှတယျလို့ သတျမှတျခံထားရတဲ့ မိနျးကလေးတှေ ကတော့ လှတာကွောငျ့ အခကျအခဲတှကေို နစေ့ဉျ ခံစားနရေပါတယျ။ သူတို့ ကွုံနရေတာတှေ ကတော့….
(၁) လူတှရေဲ့ အာရုံစိုကျခံရလှနျးတယျ
လှတဲ့သူကို ကွညျ့တာ ဘာထူးဆနျးလဲလို့ ပွောကွလေ့ ရှိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ လှတဲ့သူတှလေညျး လူပါပဲ။ အမွဲ ကိုယျဘာလုပျလုပျ လူတှကေ စိတျဝငျစားပွီး ပွောဆိုနရေတာ သူတို့အတှကျတော့ အမွဲ ကွုံနလေို့ လူစိတျဝငျစားတာကို မနှဈသကျ ကွပါ ဘူး။
(၂) လှတျလပျမှု မရှိဘူး
လကျလှုပျ ခွလှေုပျက အစ လိုကျကွညျ့တာ ခံနရေတာက သူတို့ကို အနကွေုံ့စပေါတယျ။ ကိုယျ့ကို လိုကျကွညျ့နေ သူတှကေို လဈြလြူရှုတဲ့ သူတှေ လညျး ရှိပမေယျ့ အမွဲတစေ သတိထားခံနရေတော့ ကိုယျ့လှတျလပျမှု ပြောကျဆုံးနတော သူတို့ပဲ သိပါတယျ။
(၃) အမြားကွီး ဆငျခွငျရတယျ
လူတှရေဲ့ စိတျဝငျစားခံ ကွရတဲ့ သူတှေ ကတော့ သူမြားထကျ ပိုပွီး အနအေထိုငျ ဆငျခွငျရပါတယျ။ လကျလှုပျ လကျပွော ပါးစပျလှုပျ ပါးစပျ အပွောခံရတာမို့ အမွဲ သတိထားနရေတာကလညျး သူတို့အတှကျ စိတျရှုပျ စရာပါပဲ။
လှတျလပျမှုလညျး မရှိ၊ ခဉျြးကပျ သူတှေ ကလညျး မြားဆိုတော့ သူတို့က အမွဲ စိတျရှုပျရပါတယျ။ လူတှကေ စိတျဝငျစားနေ ကွတာ ကိုက သူတို့အတှကျ စိတျရှုပျစရာ ဖွဈနရေတာပါပဲ။
ကိုယျ့ကို ခဈြတဲ့ သူတှေ မြားတာ ပြျောစရာပမေယျ့ ခဈြတဲ့သူတှေ မြားနတောက အန်တရာယျလညျး ဖွဈစသေလို သတိထား စရာလညျး မြားပါတယျ။
ကိုယျက တဈယောကျယောကျကို ပိုပိုသာသာ ဆကျဆံဖွဈရငျတောငျ မကောငျးဖွဈတတျသလို ခဈြခှငျ့ပနျနတောကို ဖွရှေငျးရတာ နားထောငျရတာလညျး အလုပျတဈခု ဖွဈပါတယျ။
ကိုယျ့ကို ခဈြတဲ့သူ အားလုံးကို ကိုယျ ပွနျမခဈြနိုငျတော့ အားနာရသလို စိတျလညျး ရှုပျရပါတယျ။ ကိုယျ့ဘကျက ခငျရသူတှေ ကအစ ကိုယျ့ကို ခဈြတယျလို့ ပွောလာတဲ့ အခါမြိုးမှာ ကိုယျ့မှာ မိတျဆှေ ဆုံးရှုံးရ မလား ဆိုပွီး တှေးပူပွီး အားနာနေ ရတာ လညျး သိပျကို ပငျပနျးတတျကွပါတယျ။
(၇) မနာလိုသူလညျး မြားတယျ
ရုပျခြောတာကလညျး ကိုယျ ရှေးခယျြလို့ ရတဲ့ အရာမဟုတျပါဘူး။ ရုပျခြောတာကွောငျ့ ခဈြသူ မြားသလို မုနျးသူတှလေညျး ရှိပါတယျ။ ရုပျကလေးကို ဗနျးပွပွီး ဆိုပွီး ပွောတတျလို့လညျး စိတျတိုရ ဒေါသဖွဈရ ပါသေးတယျ။
အလှအပကို လူတိုင်းက သဘောကျ တတ်ပါ တယ်။ ဒါကြောင့် လှတာ ကောင်းတယ်လို့ ယူဆနေပေမယ့် တကယ်တော့ လှတာက မကောင်းဘူးလို့ တွေးသူတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။
အများအမြင်မှာ လှတယ်လို့ သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ မိန်းကလေးတွေ ကတော့ လှတာကြောင့် အခက်အခဲတွေကို နေ့စဉ် ခံစားနေရပါတယ်။ သူတို့ ကြုံနေရတာတွေ ကတော့….
(၁) လူတွေရဲ့ အာရုံစိုက်ခံရလွန်းတယ်
လှတဲ့သူကို ကြည့်တာ ဘာထူးဆန်းလဲလို့ ပြောကြလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လှတဲ့သူတွေလည်း လူပါပဲ။ အမြဲ ကိုယ်ဘာလုပ်လုပ် လူတွေက စိတ်ဝင်စားပြီး ပြောဆိုနေရတာ သူတို့အတွက်တော့ အမြဲ ကြုံနေလို့ လူစိတ်ဝင်စားတာကို မနှစ်သက် ကြပါ ဘူး။
(၂) လွတ်လပ်မှု မရှိဘူး
လက်လှုပ် ခြေလှုပ်က အစ လိုက်ကြည့်တာ ခံနေရတာက သူတို့ကို အနေကြုံ့စေပါတယ်။ ကိုယ့်ကို လိုက်ကြည့်နေ သူတွေကို လျစ်လျူရှုတဲ့ သူတွေ လည်း ရှိပေမယ့် အမြဲတစေ သတိထားခံနေရတော့ ကိုယ့်လွတ်လပ်မှု ပျောက်ဆုံးနေတာ သူတို့ပဲ သိပါတယ်။
(၃) အများကြီး ဆင်ခြင်ရတယ်
လူတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားခံ ကြရတဲ့ သူတွေ ကတော့ သူများထက် ပိုပြီး အနေအထိုင် ဆင်ခြင်ရပါတယ်။ လက်လှုပ် လက်ပြော ပါးစပ်လှုပ် ပါးစပ် အပြောခံရတာမို့ အမြဲ သတိထားနေရတာကလည်း သူတို့အတွက် စိတ်ရှုပ် စရာပါပဲ။
လွတ်လပ်မှုလည်း မရှိ၊ ချဉ်းကပ် သူတွေ ကလည်း များဆိုတော့ သူတို့က အမြဲ စိတ်ရှုပ်ရပါတယ်။ လူတွေက စိတ်ဝင်စားနေ ကြတာ ကိုက သူတို့အတွက် စိတ်ရှုပ်စရာ ဖြစ်နေရတာပါပဲ။
ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့ သူတွေ များတာ ပျော်စရာပေမယ့် ချစ်တဲ့သူတွေ များနေတာက အန္တရာယ်လည်း ဖြစ်စေသလို သတိထား စရာလည်း များပါတယ်။
ကိုယ်က တစ်ယောက်ယောက်ကို ပိုပိုသာသာ ဆက်ဆံဖြစ်ရင်တောင် မကောင်းဖြစ်တတ်သလို ချစ်ခွင့်ပန်နေတာကို ဖြေရှင်းရတာ နားထောင်ရတာလည်း အလုပ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့သူ အားလုံးကို ကိုယ် ပြန်မချစ်နိုင်တော့ အားနာရသလို စိတ်လည်း ရှုပ်ရပါတယ်။ ကိုယ့်ဘက်က ခင်ရသူတွေ ကအစ ကိုယ့်ကို ချစ်တယ်လို့ ပြောလာတဲ့ အခါမျိုးမှာ ကိုယ့်မှာ မိတ်ဆွေ ဆုံးရှုံးရ မလား ဆိုပြီး တွေးပူပြီး အားနာနေ ရတာ လည်း သိပ်ကို ပင်ပန်းတတ်ကြပါတယ်။
(၇) မနာလိုသူလည်း များတယ်
ရုပ်ချောတာကလည်း ကိုယ် ရွေးချယ်လို့ ရတဲ့ အရာမဟုတ်ပါဘူး။ ရုပ်ချောတာကြောင့် ချစ်သူ များသလို မုန်းသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ရုပ်ကလေးကို ဗန်းပြပြီး ဆိုပြီး ပြောတတ်လို့လည်း စိတ်တိုရ ဒေါသဖြစ်ရ ပါသေးတယ်။
This Year : 318118
Total Users : 613251
Total views : 3011373